Kiinya oo u yeeratay Safiirkeeda Soomaaliya si ay uga jawaabto Xirmooyinkii Shidaalka Soomaaliya ee lagu soo bandhigay UK – Kalfadhi
Dowladda Kiinya ayaa u yeertay safiirkeedii ka joogay dalka Soomaaliya, waxa ayna u sababaysay arrimo la xiriira suuq gayntii Shidaalka Soomaaliya ee 7-dii bishaan lagu soo bandhigay magaalada Landhan ee dalka Ingiriiska. Kiinya waxay, sidoo kale, ku amartay safiirka Soomaaliya u joogay in uu dalkiisa ugu laabto sida ugu shaqsiyaha badan.
Sida ay warbaahinta Kiinya qoreyso, waxay dowladdoodu u aragtaa in Xirmooyinkii Shidaalka Soomaaliya ee la soo bandhigay ay qeyb ka ahaayeen badda ay Soomaaliya ku haysato, taas oo ay dacwo maxkamadeed oo caalamiya ay Soomaaliya iyo Kiinyaba uga socoto magaalada Heeg.
Agaasimaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kiinya, Macharia Kamau, ayaa goordhow warbaahinta gudaha la hadlay, waxa uuna yiri “Xaraashka Xirmooyinka Shidaalka ee ay sameysay Dowladda Soomaaliya waxay u dhigantaa qaadasho sharci darro ah, oo lagu qaadanayo kheyraadka Kiinya, mana dhaceyso inaan laga jawaabin. Waa fal gardarro ku ah dadka Kiinya iyo kheyraadkiisa”.
Waxaa la filayaa inuu danjiraha Kiinya Muqdisho ka joogo, Lucas Tumbo, uu si degdeg ag ugu laabto Neyroobi, iyada oo safiirka Soomaaliya ee Neyroobi, Maxamuud Tarsan-na, la qorsheynayo inuu Muqdisho dhaqsi ugu soo laabto, hase ahaatee wali Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) kama jawaabin go’aanka Kiinya.